Singapore Airlines hitsapana ny 'pasipaoro COVID-19' amin'ny sidina London
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Singapore Airlines hitsapana ny 'pasipaoro COVID-19' amin'ny sidina London
Ny fanapahan-kevitra hanamory ny fampiharana amin'ny sidina mankany London dia mety hampiakatra ny volomaso any UK, izay misy adihevitra mafana momba ny drafitra fampidirana pasipaoro fahasalamana ho an'ny dia iraisam-pirenena
Hanandrana ny fampiharana finday IATA Travel Pass amin'ny sidina avy any Singapore mankany London i Airline eo anelanelan'ny 15 sy 28 martsa
Ny fampiharana dia mamela ny mpandeha hamorona ID nomerika misy sary sy antsipirian'ny pasipaoro
Raha mahomby, ny zotram-piaramanidina dia hamela ny fampidirana ny rafitra Travel Pass amin'ny fampiharana finday Singapore Singapore
Singapore Airlines dia nanambara fa hizaha toetra ny fampiharana finday an'ny Travel Air Association (IATA) Travel Pass, fantatra ihany koa amin'ny hoe 'pasipaoro COVID-19' amin'ny sidina avy any Singapore mankany London eo anelanelan'ny 15-28 martsa.
Hampiasa rindranasa finday manamarina ny satan'ny mpandeha COVID-19 ilay mpitatitra, ao anatin'ny programa pilotra ho an'ny pasipaoro fahasalamana azo raisina manerantany.
IatăNy rindranasa finday dia ahafahan'ny mpandeha mamorona ID nomerika misy sarina antsipirian'ny sary sy pasipaoro. Singapore Airlines angatahina ny mpandeha hitsidika ny iray amin'ireo toeram-pitsaboana fito mandray anjara ao Singapaoro izay afaka manome ny fanamarinana nomerika ilaina ampiasain'ny fampiharana.
Ireo mpandray anjara dia mila mampiseho ny nomerika nomerika azy ireo, ary koa kopia ara-batana ny valin'ny fitsapana COVID-19 azy, hanamarinana ireo mpiasa alohan'ny hamelana azy hiakatra amin'ny fiaramanidina. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia nandoa ny fampiharana ho fomba haingana sy mety hitahiry ny antsipirian'ny fahasalamana nefa manantitrantitra fa azo antoka ny data ary tsy voatazona ao anaty tahiry foibe.
Raha heverina fa nahomby, ny programa mpanamory dia hamela ny fampidirana ny rafitra Travel Pass amin'ny fampiharana finday Singapore Airlines manomboka amin'ny faran'ity taona ity, miaraka amin'ny fanantenana fa hampiasaina amin'ny sidina rehetra miaraka amin'ny mpitatitra izany.
Singapore Airlines no nandefa ny dingana voalohany tamin'ny andrana fanamarinana ny fahasalamana tamin'ny volana desambra. Ny mpandeha avy any Jakarta na Kuala Lumpur mankany Singapore dia nangatahina handray fitsapana COVID-19 ary avy eo nomena kaody QR, izay naseho tamin'ny fisavana.
Tamin'ny fanambarana an-gazety nanambara ny dingana voalohany amin'ny fitsapana, nilaza ny kaompaniam-pitaterana fa ny fitsapana COVID-19 sy ny fanaovana vaksiny dia ho "ampahany tsy manandanja" amin'ny dia an-dranomasina mandroso ary ID ID vaovao momba ny fahasalamana dia hamorona "traikefa tsy misy tohiny" ho an'ny mpanjifa ao anatin'ny “ny ara-dalàna vaovao”. Amin'ny ho avy, Travel Pass dia afaka manamarina ihany koa ny satan'ny vaksiny.
Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka dia nanambara tamin'ny volana novambra fa miasa amin'ny fampiharana ho toy ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny dia iraisam-pirenena ao anatin'ny areti-mandringana io. Seranam-piaramanidina maro no efa naneho ny fanohanany ny ID nomerika, ao anatin'izany ny Qantas Airways, izay nilaza fa mikasa ny hanao porofon'ny fanaovana vaksiny COVID-19 ho an'ny mpandeha iraisam-pirenena rehetra izay mandeha mankany Australia. Ny tale jeneralin'ny orinasa, Alan Joyce, dia nanombatombana ihany koa fa ho lasa takiana manerantany ny pasipaoro fahasalamana nomerika.
Ny fanapahan-kevitra hanamory ny fampiharana amin'ny sidina mankany London dia mety hampiakatra ny volomaso any UK, izay misy adihevitra mafana momba ny drafitra fampidirana pasipaoro fahasalamana ho an'ny dia iraisam-pirenena.
Miara-miasa ny masoivohon'ny Firenena Mikambana hanampy ny vehivavy amin'ny fizahantany hiverina amin'ny krizy
Ny fanamboarana ny dia lavitra amin'ny fomba fijery Nepal